Shirka Todobaadka Shidaalka Afrika oo furmaya | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka Todobaadka Shidaalka Afrika oo furmaya
Waxa maanta Imaaraadka ka furmaya Shirka Todobaadka Shidaalka Afrika, kaasoo socon doona ilaa 11-ka November oo ku beegan Khamiista ina soo aaddan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirka ka furmaya Maanta dalka Imaaraadka, ayaa kulminaya Shirkadaha Reer Galbeedka ee daneeya maalgashiga Shidaalka qaarada Afrika, waxaana Soomaaliya ugu weyb galaya Wafdi sare.
Waxaa lagu dejinayaa Shirka qorshaha mustaqbalka ee qaybta saliidda iyo gaasta [Oil & Gas] ee Afrika, waxaama sidoo kale lagu gorfeyn doonaa hubinta heshiisyada waaweyn, iyadoo la soo bandhigayo iskaashiyo cusub oo faa'iido badan leh, waana mid xoojinaysa isku-xirka iyo isu-imaatinka Wasiirada tamarta Afrika.
Kulankan todobaadka soconaya, ayaa sidoo kale ah mid dhiirigelinaya in la gaaro heshiisyo iyo wax kala beddelasho, taasoo sare u qaadeysa mashaariicda Afrika, islamarkaana sahleysa iskaashi cusub iyo in la helo fursado kobcin kara dhaqaalaha Qaaradda.
Soomaaliya oo kulanka ka qeyb galeysa ayey sanadkan arrin taariikhi ah u tahay horumarinta kheyraadkeeda dabiiciga ah ee ay heysato, waxaana todobaadka uu kulanku socdo lagu wadaa in ay soo bandhigto mustaqbalka Shidaalka Soomaaliyeed, iyadoo ay madasha ku sugan yihiin dhageystayaal caalami ah oo isugu jira maalgeliyayaasha iyo hawl-wadeennada.
Sharciga Batroolka Soomaaliya iyo Heshiiska Wadaagista Dakhliga ayaa dhaqan galay bishii Maajo 2019, iyadoo dalku uu daboolka ka qaaday wareeggii shati siinta xeebaha ee daahfurka, waana arrinta fududeyneysa in Soomaaliya ay suuq geyn u sameyso saliida iyo gaasta dhulkeeda ku jira.
Wasiirka Batroolka iyo Macdanta ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo kal hore arrintaasi ka hadlay, ayaa tilmaamay in Wasaaraddu ay kulamo libin laga soo hoyey la yeelatay dowladaha xubnaha ka ah federaalka si loo abuuro, loon helo hannaan hufan oo sinnaan ah, kaasoo lagu horumarinayo kheyraadka dabiiciga ah ee uu dalka Soomaaliyeed wada lee yahay.
Barlamankii waqtigiisu dhamaaday ayaanan diyaarin xeer nidaaminaya sharciga Batroolka JFS sida, (Fiscal regime) (Environmental law) (License Bill) iyo kuwa kale sida ku cad Qodobka 45-aad ee Sharciga Batroolka, iyadoo guddiga kheyraadka dabiiciga ee Barlamankii 10-aad, ay Ra'iisul Wasaare Rooble kula taliyeen in uusan ogolaanin in heshiis caalami ah oo shidaal ay wasaaraddu gasho, kuwaasoo sida ay tilmaameen inta aan la diyaarin xeerarkaasi, khatar galin kara ka faa'iideysiga kheyraadka dalka.